Linux Kugovera Kwevana | Kubva kuLinux
Linux kugoverwa kwevana
Iko hakuna imwe nzira iri nani yekusimudzira Linux nekuputsa dzimwe dzengano dzayo (senge, semuenzaniso, kuomarara kwayo kwakanyanya, nezvimwewo) pane kuita kuti vana vatange kutamba nekuishandisa pazera diki kwazvo.. Neichi chikonzero, isu tichakurukura zvimwe zvekugoverwa kwakakodzera kwavo. Tisati tatanga, chirevo: ehe, chero Linux distro inogona kushandiswa nemukomana, zvakanyanya nhasi kuti vana vakangwara kwazvo. Nekudaro, kune mamwe madhiri ayo anonakidza uye ari nyore kunzwisisa, kunyanya kune vadiki.
1 Qimo yevakomana:> makore matatu
2 Shuga: <makore matanhatu
3 Edubuntu: 3-18 makore
4 LinuxKidX: 2-15 makore
5 Kufanoona kweVana: 3-12 makore
Qimo yevakomana:> makore matatu
Qimo yeVana iri Ubuntu-based distro ine desktop yakagadzirirwa vana chete. Iyo inouya nemitoro yezvakagara zvakaiswa "mitambo yekudzidzisa" yevana vanopfuura makore matatu ekuberekwa. Iyo interface iri nyore kwazvo uye inonzwisisika uye ine hombe uye inoshamisira mifananidzo kuitira kuti vana vawane zvese zviri nyore.
Sekureva kwevagadziri, mutsauko uripo pakati paQimo naEdubuntu ndewekuti Qimo yakagadziridzwa kuve desktop desktop system yechero mwana wePC, nepo Edubuntu ingadai yakagadzirirwa kuti ishandiswe pakombuta yechikoro network. Uyezve, Qimo ine yakanyanya mushandisi-inoshamwaridzika interface uye dhizaini, isina akaomarara mamenyu kana akawanda windows. Chekupedzisira, Qimo anomhanya akananga kubva kuLiveCD asina Ubuntu akaisirwa kare.
Qimo inoshandisa XFCE kupa inokurumidza uye yekupedzisira nharaunda. Izvo zvidiki zvinodiwa ndeizvi: 256MB yekuyeuka kuti umhanye kubva kuCD, kana 192MB yekuisa. Angangoita 6GB yediski nzvimbo uye processor 400MHz kana zvimwe.
Shuga: <makore matanhatu
Shuga ndeye Fedora-based distro, yakagadzirirwa chete Prof. Nicolas Negroponte chirongwa chakakurumbira Mumwe-Laptop-Mumwe-Mwana (OLPC). Inotarisirwa kuvana vari pasi pemakore matanhatu ekuberekwa uye yakatosiyana nemamwe ese ma distros, ichivabvumira kuti vafare asiwo kudzidza nekuvandudza hunyanzvi hwekuronga. Kune maviri cons. Yekutanga ndeyekuti yakanyatsogadzirirwa kuti ishandiswe mukirasi. Chechipiri ndechekuti chakatosiyana neakasara eiyo distros uye nharaunda yedesktop inosiyana zvakanyanya kubva kune yeiyo chero Linux zvekuti pakupedzisira zvinoita sekunge imwe sisitimu yekushandisa iri kushandiswa.
Edubuntu: 3-18 makore
Ubuntu ine vhezheni yakatorwa, inotsigirwa zviri pamutemo neCanonical, inonzi Edubuntu.
Iyi distro inouya mu3 "flavour": "mudiki", "pachena" uye "default", kune vashoma vashandisi, desktop chete kana yakajairika shanduro yekushandisa. Desktop nharaunda inoshandiswa yakafanana neUbuntu (GNOME) uye pre-akaisirwa mashandiro ari OpenOffice.org, KDE Edutainment Suite y Gcompris. Iyo KDE Edutainment Suite inosanganisira kunyorera kwevana vari pakati pemakore matatu ne3, nepo Gcompris inosanganisira mafomu evana vanoenda kukireshi.
LinuxKidX: 2-15 makore
LinuxKidX Yakagadzirirwa vana vari pakati pemakore maviri kusvika gumi nemashanu ekuberekwa. Iyo inoshandisa KDE seayo desktop desktop uye yakavakirwa pane slackware. Mamwe emapurogiramu akaiswa kare maKStars (anowanzo gamuchira), Kalzium (iyo inozivikanwa tafura yezvinhu), KTouch (typing tutor), KGeography, KWordQuiz, ChildsPlay uye zvimwe zvakawanda. Iyo purojekiti inoita senge haina mukurumbira wakawanda kana rutsigiro kubva munharaunda. Neichi chikonzero, zvingave zvakanaka kutanga wamhanya nayo kubva kuLiveCD uye wotamba nayo kwechinguva usati wapedzisira kuiisa.
Kufanoona kweVana: 3-12 makore
Kufanoona kweVana ndeye distro yakatorwa kubva Kuona Linux, yakanangidzirwa kune vana vari pakati pemakore matatu ne3 ezera. Iyo inouya neGNOME senzvimbo yedesktop uye inosanganisira Tuxpaint, Tuxtyping, Gcompris, Tux yeMath Command, Super Tux, Super Tux Card, Foobillard, GNU Chess, Nibbles, Frozen Bubble, Super Maryo Makoronike, F-Spot Photo Manager, Firefox Web Bhurawuza, Banshee Media Player, Pidgin Instant Messenger uye Totem Movie Player, pakati pevamwe. Kutarisisa kwevana kunokwezva nekukasva nyuchi iyo inoonekwa pane desktop desktop. Kana iwe uri kutsvaga distro yemwana wako, edza iyi distro iyo yakanaka kwazvo.
Ingoitika kana: kunze kwekunge wavamhanyisa kubva kuLiveCD, kumhanya chero eaya ma distros zvinoreva kuiswa kweiyo yakakwana sisitimu yekushandisa, iwo haasi mafomu anogona kumhanyisa kubva kuWindows saizvozvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Linux kugoverwa kwevana
Kugona! Mupiro wakanaka!
Pane zvikamu zviviri zvevana zvausingataure uye ndinofunga zvinogona kubatsira munharaunda yechiLatin edulibre OS uye Edubuntumx yekutanga inosanganisira winkipedia saka hazvidi kuti ubatanidzwe kuti ugone kuita mibvunzo, yechipiri yakagadzirirwa kushandiswa muCastilian uye yakavakirwa sezita zvarinoreva muEdubuntu.
Shuga haisi "yakasarudzika" yeOLPC, inogona kumhanyisa pa (potse) chero distro, kana zvirinani izvozvi, zvakananga kubva kuUSB pasina kuda dhiraivhu rakaomarara kana sisitimu yekushandisa yakaiswa. Izvi zvinogona kuve mukana wakanaka, nekuti hazvidi kuiswa "yakatarwa" pakombuta yakapihwa, asi mwana anogona kutakura system yavo yese, kusanganisira data, pane USB flash drive.
batanidzo -> Shuga padanda
imwe haina "kunangidzirwa kuvana vari pasi pemakore matanhatu." Kune zviitiko zveese mazera, zvinowanzo shandiswa nevana vezera rekuchikoro, asi pasina miganho. (Semuenzaniso mufananidzo waunayo pane peji, iwe unofunga jug yemakore matanhatu-yaizoronga izvozvo?)
Haisi chokwadi kuti «yakanyatsogadzirwa kuti ishandiswe mukirasi», nekupesana kushandiswa kwayo kwakazvimiririra kwakasimbiswa, izvo zvinotisvitsa kune imwe nhanho, dhizaini yacho inonzi inonzwisisika kune vana, saka «kuve akasiyana» iri inoonekwa sehunhu, kuve nani uye kusateedzere nhungamiro dzakaomarara dzevana ndiko kusangana kwemazhinji ma distros. Uye ichokwadi, haina kutaridzika seChirikadzi kana Mac ...
Sezvatiri, hapana distro kana chiitiko chekurongedza panguva ino chinonyanya kubatsira "kushandiswa mukirasi", mune chero chaunotaura pano, uye icho chisipo ...
Mhoro! Chekutanga pane zvese, ndatenda x komenda. Nezve kugona kutakura Shuga pane USB, izvo ichokwadi chose. Ndicho chinhu chandakakanganwa kutaura nezvacho saka maita basa nekuchitaura nezvazvo. Muchokwadi, kana ini ndataura nezvazvo, imhaka yekuti ini ndaifunga kuti chero munhu anogona kuikanda nekuimisa. Zvikasadaro, dai yaive distro iyo ingori chikamu chehurongwa hwedzidzo, ndingadai ndisina kuiisa pane iyo runyorwa.
Kune rimwe divi, iro peji reShuga repamutemo rinotaura zvakajeka kuti iyo distro iyo inoshandiswa muzvirongwa zvechikoro: «Shuga ndicho chikamu chepakati chekuyedza kwepasirese kupa mwana wese mukana wakaenzana wedzidzo yemhando yepamusoro. Inowanikwa mumitauro makumi maviri neshanu, Zviitiko zveShuga zvinoshandiswa zuva rega rega rechikoro nevana miriyoni imwe munyika dzinopfuura makumi mana. » Izvo hazvireve kuti inoshandiswa chete muzvirongwa zvechikoro, asi ipfungwa yakasimba.
Nezve dhizaini, chaisave chinangwa changu kutaura kuti chaive chakasiyana neWin kana Mac, asi kuti chakasiyana nechero Linux distro, iko kushandiswa kweShuga se "nhanho yekutanga" kuzvinyudza mu " Linux nyika "inopedzisira yave kuita isinganzwisisike. Zvaingova izvo ...
Zvekare zvakare, ndatenda x komenda. Ndakawana zvawacherekedza zvakanyanya!
Arturo rivera akadaro
Ini ndangoda kukutendai nekuunganidza kwako uye ruzivo ruzivo. Izvo zvave zvichindibatsira kwazvo pakusarudza distro yemwanasikana wangu uye yevadzidzi vemukadzi wangu.
Pindura kuna Arturo Rivera
Luis Francisco Matus Beltran akadaro
NDINEMWANA MWANA-MUGORE-WEGORE-GORE uye NDINOGARA NDINONYANYA KUSANGANISA IYI NDIMPI YAKANYANYA !!
Pindura kuna Luis Francisco Matus Beltran
Ndiri kufara kuti inoshumira! Mufaro! Paul.
Pane ino peji pane zvakare yakanaka chinyorwa nezvazvo:
FLASH online mitambo haishande zvakanaka kunyangwe uine komputa nyowani ...
Muchokwadi mitambo yepamhepo yeShockwave yevana inodiwa nemuzukuru wangu wemakore matanhatu isingashande….
Chero mazano ekuti vashande?
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri. Flash inoshanda kwandiri, asi haishande kana zvasvika paku "pindirana" (kudzvanya mabhatani, nezvimwewo) nemushandisi. 🙁 Tichafanirwa kumirira kugadzirisa kwe plugins. Kana iwe ukandibvunza, ini handifunge kuti ichi chikanganiso cheLinux asi pane Adobe isiri kuburitsa yakanaka Linux plugins uye kwete kuvhura Flash sosi kodhi.
Acevedo Dhadha akadaro
Ingo kupa kumwe kujekeserwa nezveShuga. Haisi nharaunda yemadhizaini, maforodha, mabhini, nezvimwe. Iyo inzvimbo yekudzidzira yakanangana nedimikira remwana nenzvimbo yake. ASi ndeyekuti maonero ndeenharaunda, shamwari dzako uye zviitiko zvaunofanira kukudziridza. Mufananidzo wacho hauna kunyatsokwezva, unongoratidzira chiitiko chekamba nematanho ekuvaka wachi, ichi ndicho chimwe chezviitiko izvo Rodhi rinodzora asi hachisi chikamu chidiki pane izvo izvo Sugar. Kana ichitarisawo pakudzidza, chikumbiro chayo ndechekudzidza nekuyedza, saka pane zviitiko zvakawandisa, zvakawanda zviri muchimiro chemitambo.
Uye zvakare, iyo yakazara Gcompris inotakurwa muchimiro chemabasa ega, iyo tuxpaint, tuxmath, mathematical tetris, SIMCity, iyo yakavhurwa sosi yetimu mutambo "Hondo yeWsenoth", nezvimwe. Ndokunge, kune mitambo, uye yakawanda.
Pindura Pato Acevedo
Mupiro mukuru. Kutenda nekupedzisa uye nekuvandudza iyo posvo!
Olá kune wese munhu,
Iwe unofanirwa kunyora muchiPutukezi kuti usagumbure chero chinhu senge "portunhol". 🙂
Iko kune pano mugove wakashandurwa kuzvikoro zvinonzi Pandorga GNU / Linux. Ela dzakashandurwa kana kushandiswa nevana, ini ndine chinoonekwa chinoenderana nesso. Kana endereço do sítio é:
Um hug uye parabéns pela publicação.
Obrigado nekutaura kwakakomba. Ndiri kuedza zvishoma zve distro izvo iwe zvawakakurudzira uye ndinofanira kubvuma kuti ini ndakagovana zvakawanda! Acho que vou fazer um artigo sobre ele. Iwe unoziva here kuti inogona kushandiswa mune dzimwe nyika kunze kweBrazil? Pane here vhezheni muSpanish?
Juan Rodriguez akadaro
Ini ndinofunga EdulibreOS yanga isipo ipapo, kunova Ubuntu-kwakavakirwa kugovera kwakagadzirirwa vana uye kuchizadzisa dzidziso yakapihwa nevadzidzisi. Ini ndinokusiya iwe zvinongedzo zveprojekiti izvo zvishoma nezvishoma zvave zvichikura uye zvichibatsira zvakanyanya nekuwedzera kudzikisa kusagona kuverenga munyika yangu Guatemala. http://edulibre.net/ http://www.edulibreos.com/
Pindura Juan Rodríguez
Hapana dambudziko. Ndichaedza kubatsira nepandinogona napo, kana nguva dzichitendera.
Kumbundira kukuru uye rombo rakanaka neako kutsva kuita!
Mangwanani akanaka ini ndiri Informatics Mudzidzisi muVenezuela uye sezvaungave uchitoziva, pano tine kugoverwa kunoitwa nesu kunzi CANAIMA (Auyantepui del Kerepakupai-merú | Angel Falls) iyo yatove mushanduro 3.0 uye kune CANAIMA EDUCATIVA kugovera ( www.canaimaeducativo .gob.ve) iyo mumaonero angu yakanaka uye unofanirwa kuiisa ipapo .. kuti iite kuti izivikanwe
Mhoro david! isu takaburitsa akawanda akati wandei nezve CANAIMA.
Kwazisai uye nekutenda nekupindura !! Paul.
Izvo zvakanaka! Ndafara!! Makandipa mashoko akanaka ezuva iri. 🙂
Zae Makhrus akadaro
Ini ndinoda linux, ndinoda Qimo 🙂
Pindura Zae Makhrus
Buendia Pablo: Ndiri kukunyorerai kubva kuguta reIbague (Tolima- Colombia), sezvamakamboitawo rimwe basa, iro reAgronomist Injiniya, kubvira 1993, uye ndipo pandakangoyambira nharaunda yevarombo muOrinoquia neColombia Amazon, ndakamboona here zvakaita zvakaita kuva kunze kwenyika winXXX, pandakatenga Mac iMac kubva muna 2004, ndichibva ipapo ndakasvetukira kuLinux uye kubvira ipapo, ndakaedza akasiyana GNU distros nemidziyo yakaderera-chinzvimbo. Ini handisi mugadziri uye ini handina hunyanzvi kana ruzivo rwekuzviita, asi mumakore masere ndakaedza linux, red hat, openolaris masisitimu uye ini ndichiri kuda kuyedza gentoo. Zvakanaka kubva kubhulogi rako ndatora pasi distro yevana, nekuti mumavhiki matatu ndinovhura nzvimbo yekaresitoreti diki yemabhuku mudhorobha reIbague, imomo mukuwedzera kune matsva uye kuverenga mabhuku, kofi, zvinwiwa, ndinovimba kubatsira shamwari uye bored vatengi ne winXXX kuyedza linux uye kudzidza nayo izvo zvandakadzidza nezve linux kusvika nhasi. Kuburitswa kwayo kunobatsira nekuti mumakore ano maPC mazhinji ekare data (8, 95, 98, nezvimwe pano) ndakavaisa ne linux uye vanoshanda 2000% kusiyana ne winXX yavo yekare; Naizvozvo, Pablo, ndinovimba kubva zvino zvichikunetsa nemibvunzo yemakakatanwa inogona kuoneka mubhizinesi rangu diki, bye (nhamba yangu yepasirese ndeye (100) (57) (8) uye nhamba yangu yefoni ndeye 2633078, email yangu iri luisorlando1@aol.com), bye uye zvakare ndatenda neruzivo rwandakasangana naro papeji rebel.org. chisarai
Pindura kuna luisorlando1
Etienne d'Emmabuntus akadaro
Pindura kuna Etienne d'Emmabuntus
Ini ndangotaura nezvazvo mune imwe posvo, mumaonero angu ekuzvininipisa, iyo yakanakisa distro yevana, kunyangwe yevakuru, ndeye nharo. Iine zvirongwa zvisingaverengeki, zviri nyore kwazvo kushandisa uye zviri nyore zvakanyanya. Ini ndinotoishandisa kugadzira zvinyorwa zvangu, kusevha mafoto angu uye kugadzira montages evhidhiyo. Iyo ine chirongwa chekudzora chevabereki chenguva yandinoda uye mazhinji mazhinji mamwe mapurogiramu asiri mune kumwe kugovera. Kana usiri kunetswa nemavara evana, iri chaiyo desktop dhizaini imwe nzira kune wese munhu.
Ndatenda zvikuru nemipiro iyi. Basa rakanaka ravanoita rinotendwa.
Pane kupokana, ndinotenda iwe x komendi!
Ndiri kutsvaga chikumbiro chekutibatsira kuramba tichienderera mberi nemwanasikana wangu ane Cerebral Palsy. Gore rakapera takawana fambiro mberi yakanaka nekuda kwebhuku rekunyora iro raanoshandisa nemudzidzisi uye psychopedagogue. Ini ndiri munhu anofarira Ubuntu uye zvine musoro ndakaisa ino inoshanda system pabhuku. Ndine zvirongwa zvakati wandei asi ini handisi kuwana imwe yekuenderera mberi. Mwanasikana wangu ave kujairana nemadhindaini makuru saka handisi kuwana chirongwa chinoshanda nenzira iyi chete. Nhamba idzi rimwe dambudziko sezvo tisingakwanise kuwana nzira yekunyatsonzwisisa zvazvinoreva, anozviita nekuverenga kusvika gumi, dzimwe nguva zvishoma, asi isu tiripo. Zvese zvinounzwa ndezvekuti kana mumwe munhu ari paforum achiziva kana achiziva kunyorera, vanogona kuzvitaura kwandiri kuti ndiise uye ndiyedze. Mwanasikana wangu ane makore gumi nematanhatu ekuberekwa, iye anodzidza pachikoro chakajairwa nemudzidzisi akasarudzika anomugara kweawa nehafu ozogara nevamwe vaanodzidza navo kubva pagiredhi rekutanga. chikoro chesekondari gore.
Ndatotenda nguva yenyu. Cordially.
Chinhu chekutanga chandiri kuda kukuudza ndechekuti ndinoyemura kwazvo simba uye kuzvipira kwauri kupa kuna mwanasikana wako. Icho chinhu chiri kutaurwa kwete kuyemura. Handizive kana mhinduro yangu ichizokubatsira mune chero chinhu asi iwe unogona kutarisa ino chaiyo chinyorwa, pamwe iwe unowana chimwe chinhu chinonakidza. Iwe unogona zvakare kutarisa iyi imwe link.
Chimwe chinongedzo chingave chinonakidza: Razaro
Ndinovimba unowana chimwe chinhu kubatsira mwanasikana wako.
Gadzira Waini neMunda Wemizambiringa
Maitiro ekubvisa zvakachengeteka Evolution